स्वास्थ Archives - Page 15 of 22 - Dna Nepal
मनिपालको समस्या सुल्झाउन प्रदेश सरकारको उच्चस्तरीय समिति २३ श्रावण २०७५, बुधबार १३:३९
पोखरा, साउन २३ । मणिपाल शिक्षण अस्पतालको दीगो व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अस्पतालमा हुने समस्याप्रति चासो देखाएको हो । अस्पतालको चुस्त ब्यवस्थापनकै लागि पूर्व जिल्ला न्यायधिश..
गण्डकी सरकारले हजार शैयाको अस्पताल बनाउने, अध्ययन पूरा २० श्रावण २०७५, आईतवार १७:१२
पोखरा, साउन २० । गण्डकी प्रदेशको सरकारले १ हजार शैयाको अस्पताल बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विशेष समिति गठन गरेर अस्पतालको पूर्व सम्भाब्यता अध्ययन गरिसकेको छ । सुविधासम्पन्न पाँचवटा विशिष्टीकृत (स्पेसलाइज्ड) रोगको उपचार गर्ने अस्पताल..
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा तालाबन्दी १९ श्रावण २०७५, शनिबार १२:५४
पोखरा, साउन १९ । पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल (स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) मा तालाबन्दी गरिएको छ । कर्मचारी युनियनले विभिन्न तीनबुँदे माग गर्दै प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गरेको हो । नयाँ कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा..
प्रदेशकै मुख्य अस्पतालको कन्तबिजोग ! मूख्यमन्त्री भन्छन्–मेरो हातमा छैन १५ श्रावण २०७५, मंगलवार ०४:३७
पोखरा, साउन १५ । सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको अनुगमन गरे । आवश्यक उपकरण नहुँदा विरामीले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो दिनहुँ बढ्न थालेपछि उनी अनुगमनमा निस्किएका हुन् । पोखरा..
प्रसाई र थापामाथि कारबाही माग गर्दै बंगलादेशका नेपाली विद्यार्थी आन्दोलित १४ श्रावण २०७५, सोमबार ०३:५१
काठमाण्डौं, साउन १४ । बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई र पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल स्टुडेन्ट युनियन, बंगलादेशले आपत्ति जनाएको छ । उसले प्रसाईमाथि कानूनी कारबाही तथा थापाले माफी माग्नु पर्ने भन्दै..
सांसद पहारीको सदनमा प्रश्न–स्वास्थ्यको हवमा सिटी स्क्यान छैन ?
पोखरा, साउन १४ । पोखराका सांसद राजीव पहारीले प्रदेशको राजधानी पोखरामा सामान्य प्रविधि र मेसिनहरु नहुँदा विरामीले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो सदनमा उठाए । केही समयअघि त्रिशुली दुर्घटनाका विरामी पोखरा ल्याउँदा उनको उपचारका लागि ४ वटा अस्पताल..
पोखरमा च्याउ खाँदा एकैघरमा ६ जना विरामी १३ श्रावण २०७५, आईतवार १२:३८
पोखरा, साउन १३ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १ बगरमा च्याउ खाँदा एकै परिवारका ६ जना विमारी परेका छन् । शनिबार बेलुका पोखरा महानगरपालिका १ बगर स्थितमा शिक्षा कार्यालय नजिकै रहेको तरकारी पसलबाट किनेर लगेको च्याउ पकाएर खाँदा उनीहरु विरामी परेका..
पोखराको हालत–एउटा उपचारका लागि ४ अस्पताल डुल्नुपर्छ विरामीलाई ! ११ श्रावण २०७५, शुक्रबार १५:३२
पोखरा, साउन ११ । चुस्त ब्यवस्थापन नहुँदा पोखराका अस्पतालहरुमा गम्भीर गल्ती भैरहेको घटना सामान्य भैसक्यो । डाक्टरको लापरबाहीले विरामीको ज्यान गएको आरोपमा पटक पटक आन्दोलन पनि चलिहरन्छ पोखरामा । तर शुक्रबार अर्को अनौठो घटना घट्यो । अस्पतालमा..
त्रिशुलि दुर्घटनाका घाईतेको पोखरामा उपचार, मनिपालमा छैन सिटी स्क्यान
पोखरा, साउन ११ । काठमाण्डौंबाट स्याङजा वालिङका लागि छुटेको बस चुम्लिङटार स्थित त्रिशुलीमा खस्दा घाईते भएकालाई उपचारका लागि पोखरा ल्याईएको छ । एन्फा स्याङजाका पूर्व अध्यक्ष तथा एन्फाका केन्द्रिय सदस्य लालबहादुर ज्वारचनलाई उपचारका लागि पोखरा..
डा. केसीलाई निशर्त वार्तामा आउन सरकारको आह्वान ५ श्रावण २०७५, शनिबार १७:०९
काठमाण्डौं, साउन ५ । सरकारी वार्ता टोलीले डा. गोविन्द केसीलाई निशर्त वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता नभएसम्म वार्तामा नबस्ने डा. केसी पक्षको टोलीको अडानका कारण वार्ताले गति लिन नसकेको वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा..